Waxbarashada hiwaayadda ah - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Waxbarashada hiwaayadda ah
Waxbarashadu ma ahan oo kaliya xirfad barasho. Waxbarashadu waxay adiga kuu noqon kartaa hiwaayad aad xiiseeyso. Waxaad wax ka baran kartaa goobo waxbarasho oo kala duduwan sida: jaamacadda furan (avoin yliopisto) ama iskuul xirfadeeda sare ee furan (avoin ammattikorkeakoulu), jaamacadda xagaaga (kesäyliopisto), jaamacadda dadka da’da ah (ikäihmisten yliopisto), machadka shacabka (kansalaisopisto), machadka dadka shaqeeya (työväenopisto) iyo machadka dadka (kansanopisto). Waxbarashadu inta badan waa lacag.
Goobahan waxbarasho badankood waxay dadka dalka u soo guuray u fidiyaan barashada luqada Finnishka iyo iswiidhishka. Ka aqriso dheeri boga InfoFinlandi Luuqada finnishka iyo iswiidishka. Sidoo kale waad baran kartaa luuqado kaloo badan sida ingiriiska iyo faransiiska.
Machadka bulshada waxaad sidoo kale ku baran kartaa aqoon xirfadeed.
Jaamacadda furan iyo iskuul xirfadeedka sare ee furan
Jaamacadda furan (avoin yliopisto) iyo iskuula xirfadeedka sare ee furan (avoin ammattikorkeakoulu) waxay bixiyaan koorasyada jaamacadda iyo iskuul xifadeedka sare. Qof kasta ayaa wax ka baran kara iskuulaadka taclinnta sare ee furan. iskuulaadka tacliinta sare ee furan waad ka baran kartaa haddii aadan xitaa heysan wax shahaado ah.
Waxaad wax ka baran kartaa iskuulaadka tacliinta sare:
haddii aad dooneyso inaad hiwaayad ka dhigato waxbarashada
haddii aad dooneyso inaad u gudubto iskuulka tacliinta sare si aad maado gaar ah uga barato
haddii aad rabto inaad balaariso aqoontaada xirfadeed
Iskuulaad tacliinta sare ee furan ma lahan imtixaan gelitaan. Waxaad iska qori kartaa koorasyada guga sanadka bilowgiisa, koorasyada deyrtana dhamaadka xagaaga. Toos isaga diiwaangeli kooras cayiman. Waad baran kartaa koorasyo kalikali ah ama waxbarasho dhameystiran.
Waxbarashada iskuulaadka tacliinta sare ee furan waa mid la bedbedeli karo. Waxaad koorasyada qaadan kartaa maalinta, galabta ama dhamaadka todbaadka. Waxaad sidoo kale ka baran kartaa internetka.
Waxbarashada iskuulaadka tacliinta sare ee furan ma ahan mid maalinta oo dhan ah, sidaas darteed ma heleysid kaalmada waxbarashada (opintotuki) ama qiima dhimista ardayga loo sameeyo marka aad iskuulaadka tacliinta sare ee furan aad wax ka baraneyso.
Waad qaadan kartaa waxbarashada iskuulaadka tacliinta sare ee furan haddii aad qaadato mag-dhawga shaqo la’aanta (työttömyyskorvaus). Waxbarashooyinku ma jarayaan siismada mag-dhawga shaqo la’aanta.
Waxyaabaha laga barto iskuulaadka tacliinta sare ee furan waa kuwa faa’iido u leh waxbarashada. Marka aad u gudubto iskuul xirfadeedka tacliinta sare uma baahnid inaad dib u barato koorasyadii aad ku soo baratay iskuul xirfadeedka tacliinta sare ee furan. Haddii aad wax ka baratay jaamacadda furan islamarkaasna aad dooneyso inaad jaamacadda gasho waxaad ka qeybqaadaneysaa codsi gaar ah (erillinen haku).
Koorasyada jaamacadda xagaaga (kesäyliopisto) waa kuwa aad ugu dhow kuwa jaamacadda furan. Jaamacadda xagaaga waxaad wax ka baran kartaa waqtiyada kale ee aan xagaaga aheyn. Koorasyada jaamacadda waxaa dheer oo ay jaamacadaha xagaagu qabaqaabiyaan waxbarashooyin kale, tusaale ahaan:
waxbarashada dhameystirka ah (täydennyskoulutus) ee xirfadda
waxbarashada xoogga shaqada (työvoimakoulutus)
koorasyada abi (abikurssi) ee ardayada dugsiyada, ardaydaas oo u diyaargaroobaya qoraalka shahaada sare
koorasyada luqada Finnishka ee ajnabiga loogu talagalay
Helitaanka koorasyadu waa kuwa isbedbedelaya. Weydii wararka waxbarashada rasmiga ah ee jaamacadda xagaaga ee kuu dhow.
Warbixinta waxbarashada xagaaga ee jaamacadaFinnish | Iswidish
Macluumaadka jaamacadda xagaagaFinnish
Jaamacadda dadka da’da ah
Jaamacadda dadka da’da ah (ikäihmisten yliopisto) waxaa loogu talagalay dadka ka weyn 60 sano. Waxbarashada jaamacadda dadka da’da ah waa qeyb kamid ah hawlaha jaamacadda furan.
Jaamacadda dadka da’da ah waxay qabanqaabisaa muxaadarooyin isku xiriirsan iyo koorasyo safaro waxbarasho. Weydii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan jaamacadda dadka da’da ah xafiiska jaamacadda xagaaga.
Machadyada bulshada iyo dadka shaqeeya
Finland waxaa ku yaal machadyo shacab (kansalaisopisto) iyo machadyada dadka shaqeeya (työväenopisto). Waxyaabaha aad kuwaas ka baran karto waxaa ka mid luqadaha, shaqooyinka gacmaha, jimicsiga, farshaxanka iyo cunto karinta. Machadyada bulshada iyo machadyada dadka shaqeeya waxay bixiyaan waxbarasho dhinaca hiwaayadda ah. Iyaga laguma baran karo waxbarashada xirfadda.
Machadyada bulshada iyo machadyada dadka shaqeeya waxay koorasyada lagu barto luqada Finnishka u qabanqaabiyaa dadka dalka u soo guuray. Weydii wararka ku saabsan koorasyada machadyada bulshada iyo machadyada dadka shaqeeya.
Qaababka loo codsado waa kuwa isbedbedela. Guud ahaan waxbarashada guga waxaa la codsadaa sanadka bilowgiisa, waxbarashada deyrtana sanadka dhamaadkiisa. Weydii xafiiska waxbarashada ee machadka bulshada iyo machadka dadka shaqeeya waqtiyada codsiga.
Warbixinta xarumaha waxbarasho iyo waxbarashada dadka waaweynFinnish | Iswidish
Machadyada dadku (kansanopisto) waxay bixiyaan waxbarasho xirfadeed iyo mid hiwaayadeed. Machadka dadka waxaa gadaal ka taagnaan kara urur ama wuxuu ahaan karaa machad madaxbanaan.
Waxaad machadka dadka ka baran kartaa xirfad. Machadka dadka waxaad ka baran kartaa tusaale ahaan daryeelista xayawaanka ama masaajeynta.
Machadyada dadku waxay dadka dalka u soo guuray u qabanqaabiyaan waxbarashooyin badan. Waxaad machadka dadka ka baran kartaa luqada Finnishka ama waxaad ka dhigan kartaa waxbarashada diyaarinta ah.
Machadyada dadku waxay guud ahaan qabanqaabiyaan laba waxbarasho oo kala duduwan, koorasyo gaagaaban (lyhytkurssi) iyo leyman waxbarasho oo dhaadheer (pitkä opintolinja). Koorasyada gaagaaban dadka oo dhan ayeey u furan yihiin umana baahna in la codsado. Is-ogeysiin oo kaliya ayaa ku filan.
Leymanka waxbarasho ee dhaadheer waa kuwa inta badan waxbarashooyinka xirfadeed ah. Waxay inta badan qaataan laga bilaabo sanad barkiis ilaa sanad. Leymanka dhaadheer waa in gooni loo codsado. Qaababka codsashada iyo waqtiyada codsiga ee machadka dadku waa kuwa isbedbedela. Weydii xafiiska waxbarashada ee machadka dadka codsiga ardayga.
Warbixinta xarumaha waxbarashadaFinnish | Iswidish
Macluumaadka machadka dadkaFinnish
Koorasyada machadka bulshadaFinnish | Iswidish